Mba ndị na-ewepụta ike ikuku taa | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Mba ndị na-arụpụta ikuku ikuku ugbu a
Manuel Ramirez | | Ike ikuku, Ike imeghari ohuru
La ike ikuku bu otu uzo esi agbanwe ugbu a gaa na mbara ụwa ndị ọzọ na-enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ha na iji mmanụ ọkụ eme ihe. Naanị ị ga-amararịrị na opekata mpe mba 84 gburugburu ụwa na-eji ike ikuku iji nye grid eletrik ha.
Naanị otu afọ gara aga ikike nke ifufe gafere 369,553 gW na ngụkọta mmepụta ume na-eto n'ike n'ike ka ọ bụrụ pasent 4 nke ọkụ eletrik zuru ụwa ọnụ eji eme ihe. Ma ọ bụrụ na 17 gW arụnyere na 2014 abụrụla ihe ọfụma, na ọkara nke mbụ nke 2015 ha ruru 21,7 gW, nke na-ewetara anyị ike ụwa dum nke 392 gW, ihe dịka 428 gW na njedebe nke afọ a.
Ike ụwa toro na ọnwa mbụ nke 2015 site na 5,8 percent mgbe anyị nwetachara 5,3% na 2015 na 4,9% na 2013 n'otu oge ahụ.Ọ bụrụ na anyị tụlee na na 2014 mmụba afọ ọ bụla bụ 16,5 pasent ka ọ bụrụ na etiti afọ 2015 a ga-eru 16,8 pasent, anyị nwere ike ịma maka oké afọ anyị na-arapara n'ahụ na 2015.
Mmụba a na ojiji nke ike ifufe bụ n'ihi tumadi na uru akụ na ụba Site na isi mmalite a, mmụba nke asọmpi, enweghị mgbagha na mmanụ na gas na-eweta ụwa na nrụgide ịkwaga na teknụzụ dị ọcha ma na-adigide oge.
1 Ndị na-emepụta ike ikuku
3 Mba ndị ọzọ ga-adị oke mkpa
4 Igodo ikuku ike maka ume n'ọdịnihu
5 Nyocha na mmepe nke teknụzụ ọhụrụ
6 2016 afọ dị ezigbo mkpa maka ike ikuku
Ndị na-emepụta ike ikuku
Ulo oru ikuku di ugbu a na-agba ezigbo ụlọ ọrụ dị iche iche nnukwu ikike, nkwado na-arụkọ ọrụ ọnụ na ndị otu gburugburu A maara na maka nnukwu ihe ịga nke ọma nke ụdị ike a ọbụlagodi ọtụtụ iche iche ga-adị mkpa.
Na njedebe nke June 2015, mba nwere a ike ikuku arụnyere bụ China na nke mbụ, United States na-esote ya na Germany na nke atọ.
China nwere 124 gW afọ a na toro site na 10 gW kemgbe 2014 na 44 gW kemgbe 2013. Ọganihu na-aga n'ihu nke na-enyere aka, n'akụkụ ụfọdụ, iji belata nsogbu mmetọ ya, ọ bụ ezie na ọ ga-adị mkpa itinyekwu ego n'ụdị isi iyi a iji nwee ike belata ha n'ezie.
Nke ọzọ bụ United States nwere 67 gW arụnyere Na uto ya kemgbe 2013, naanị afọ abụọ, ikike ya amụbawo site na 8 gW na ezigbo nkwụsị, ihe nwekwara ike ịhụ na Germany, India na Spain, n'ezie, ma e jiri ya tụnyere nnukwu uto nke China.
Ewezuga ike ndị dị na ike ifufe, ọ dị mkpa kwuo Brazil nke gosipụtara ọkwa kacha elu uto nke ahia nile na 14% uto na afo a 2015.
Dị ka ihe na-adịghị mma, anyị na-achọta ọtụtụ ahịa Europe nke ahụ akpọnwụwo, ihe ga - eme German mgbe mgbanwe ụfọdụ na iwu ahụ na - abanye maka afọ abụọ na - esote, ihe ga - ebelata ikike ikuku ya.
China na-atụ anya inwe 347,2 gW site na 2025 na nrụnye kwa afọ nke ga-eru 56,8 gW. Ihe dị oke mkpa nke ụdị ike a ga-apụta mba a.
Ma ọ bụ ezie na China dị ugbu a dịka onye kachasị ike nke ụdị ike a, ọ bụ n'ezie na oge nkwụsị. Ọnụ ọgụgụ dị 2025 ụwa ga-agafe 962,6 gW nke pụtara na China ga-abụ, ọbụlagodi na ndọghachi azụ a, otu n'ime ndị isi ụdị ike a na mbara ụwa.
Ọ bụ kpomkwem na afọ a na ọ na-e buru amụma na China ga na-abụghị nanị na-categorized dị ka nke kachasi ike n'ime ikuku site na 2015, mana ọ ga-aga n'ihu na-eduzi ngalaba a na 2016.
Mba ndị ọzọ ga-adị oke mkpa
India, Australia, Japan, South Korea, Philippines, Thailand, na Taiwan mụbaa ikike ha site na 148,2 gW na 2014 ruo 437,8 gW na pasent ụwa zuru oke nke ga-eru 45,5%.
Mba ndị ọzọ bụ isi maka ihe ịga nke ọma nke ike ikuku bụ Argentina, Brazil, Chile, Colombia na Mexico nke ga-agbakwunye 45,6 gW. Anyị ekwuolarị banyere Uruguay na Costa Rica dị ka abụọ n'ime ihe atụ kachasị ukwuu nke atumatu na-enye ohere uto nke ụdị ike a dị ọcha, ihe dị mkpa maka ọdịnihu anyị.
Igodo ikuku ike maka ume n'ọdịnihu
Typedị ike a aghọwo ọnụ ọnụ dị irè. N'ebe oriri oriri na-aba ụba, a ghaghị ịmepụta ụzọ ọhụrụ, ọ bụkwa ebe a ka ike ikuku ga-arụ ọrụ dị oke mkpa.
Na ahịa ndị tozuru etozu ebe akụrụngwa maka coal, nuklia ma ọ bụ gas gasị adịlarị, enwere nsogbu ndị ọzọ n'ihu n'ihi nnukwu mgbanwe ga-ewere ọnọdụ. Ọ bụ ebe a ebe ike ikuku agha ka mpi megide ugwo mmezi site na isi mmalite ike. N'agbanyeghị nke ahụ, isi iyi nke ike sitere na ifufe bụ nhọrọ dị mma, na-abụghị eziokwu na ọ na-enye ike n'emeghị gas.
O nwekwara ihe na-aga maka ya ma ha na-ebelata ụgwọ. E nwere isi ihe atọ kpatara ya. Otu bụ na ikuku turbines ha na-aka nká, nwere nnukwu ụlọ elu na owuwu ọkụ. Nke abuo bu na ntinye oru oma na abawanye na sistemu n'igwe na-ebelata ugwo. Nke atọ, na nke ikpeazụ, bụ na ka nrụnye ikuku na-eto, a na-echekwa ego site na imepụta ya n'ọtụtụ buru ibu karịa ka ọ dị na mbụ.
Ihe ọzọ bụ isi kpatara ya bụ ọgụ na ihu igwe na mmetụta nke ike dị ọcha ma dịkwa ọnụ ala nwere ike ịnwe bụ nke ga-adịgide oge. Inye ike ahụ dị mkpa ka ụwa anyị bi na ya rụọ ọrụ ma n'otu oge anaghị ebute nsị CO2 na mbara igwe bụ ebumnuche nke ụlọ ọrụ ndị isi dị ka Vestas.
Ihe dị mkpa nke ike ikuku
Nyocha na mmepe nke teknụzụ ọhụrụ
Ọ dị ezigbo mma ntinye ego dị mkpa na teknụzụ ọhụrụ nke mere na ike ịrụ ọrụ sitere na turbines ndị a na ihe ọhụrụ dị iche iche na-eduga n'okporo ụzọ ndị ọzọ ebe ha nwere ike ịmalite pasent dị elu na oriri zuru ụwa ọnụ nke ike sitere na ike ikuku.
Anyị ahụla ndị toro ogologo nke Bill Gates ha na-etinye ego buru ibu na teknụzụ ike ọhụụ dị ka nde $ 2.000 o jiri.
O sitere na ndi oru teknụzụ ndi choro na anyi aghaghi igbanwe uzo anyi si ahu ebe ike anyi di. Ọ bụrụ na anyị kwuru banyere Gates, onye ọzọ nke ndị ukwu dị ka Mark Zuckerberg na-emekwa ntakịrị ihe ha ájá iji gbaa ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị iche iche ume ịchọ ọdịnihu dị ọcha karịa mmadụ niile na ụwa na-adigide.
Google nwere oru oma ozo n'Africa ebe ọ ga-etinye ihe karịrị igwe ifufe 365 n'ikpere mmiri nke Ọdọ Mmiri Turkana na Kenya. Kedu nke ga-enye pacenti iri na ise nke ọkụ eletrik a na-eri na mba a.
El nchekwa nchekwa A na-egosikwa na ọ dị oke mkpa maka mgbanwe ndị a niile dị mkpa ga - eme ebe ọ bụ na ịchekwa ike njupụta nke ọtụtụ narị ikuku ikuku nwere ike inye dị oke mkpa ọbụlagodi iji mesie ojiji nke isi iyi ike dịka ike ikuku.
Tesla na batrị ụlọ ya na-egosi ụzọ ọzọ, mana kama n'ihe ga-abụ ịdabere n'onwe anyị ike ndị ọrụ, mana n'ọtụtụ buru ibu ọ nwekwara ike ịnye batrị dị mkpa iji "chekwaa" mkpokọta ahụ.
Anyị nwekwara teknụzụ ọhụụ dịka ndị turbines na-enweghị pupụtara kere site na Vortex, ụlọ ọrụ Spanish nke na-ada ụda ugbu a n'ihi ntinye nke ụfọdụ ikuku ikuku nke na-enweghị ike ibute mmetụta gburugburu ebe obibi, ebe ọ bụ na ewezuga mkpọtụ nke ọdịnala ndị ọzọ, ha anaghị agbanwe gburugburu ebe obibi dịka ha si eme.
Teknụzụ Vortex a na-arụ ọrụ n'ụzọ dị otu a na-eji nrụrụ emepụtara site na ịma jijiji nke ifufe na-ebute mgbe ọ na-abanye na resonance na-anọpụghị ada na cylinder ma gbanye ya na ala. Ọ bụ nrụrụ a bụ ọrụ maka ịmị ọkụ eletrik.
2016 afọ dị ezigbo mkpa maka ike ikuku
Na Nzukọ Paris Climate Summit e nweela ọtụtụ nkwekọrịta na-etinye 2016 dị ka a dị oké mkpa afọ nke mere na ndị a percentages nke ifufe ike ike ga-ebili nke ukwu n'ihi ihe ndị mere na anyị niile maara.
Nkwupụta maka ihu igwe a na-etinye ike ikuku dị ka otu n'ime isi ike dị mkpa maka mbelata gas na-eme ka ikuku na ikuku na-ebute nsogbu na ọdachi ndị na-emere onwe ha n'ụwa niile. Mgbanwe nke a ga-esi n'akụkụ nile nke ụwa a nwee nnukwu nsonaazụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike ikuku » Mba ndị na-arụpụta ikuku ikuku ugbu a
Ebumnuche nke ịmepụta ọtụtụ ikuku ifufe iji meziwanye gburugburu ebe obibi dị mma
mmiri soda dijo
Ọ dị mma na ọ nyeere m aka maka ụlọ akwụkwọ ...: p
Zaghachi lucy sosa
ooooooooooo o di nma
isi awọ dijo
Na-agbago ihe ọma
Zaghachi ka o nye gi ike
daana Ramones dijo
Nke a nyeere m aka maka ụlọ akwụkwọ m wee nweta A
Zaghachi ka dariana ramones
flores dị dijo
O nyekwara m aka maka ụlọ akwụkwọ m wee were nke dịka darana ramones
Zaghachi florencia torres
Echere m na ọ dị mma na ha na-etinye gburugburu ebe obibi.
Ifufe ume bụ ibu echiche!
Anyị nwere teknụzụ ọhụụ maka nchekwa nke ike sitere na anyanwụ na ike ikuku na oge a na-ewepụta ya yana, iji nwee ike iji ya n'oge kachasị oriri na-abụghị oge nke ọgbọ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, kpọtụrụ anyị info@zcacas.com
Anọ m na-enyocha okwu a afọ 30 gara aga, enwewo m patented ọtụtụ ọrụ mana abụọ dị iche iche, otu nwere ike ikuku na-enweghị atụ na nke ọzọ maka ebili mmiri. Ruo ugbu a enweghị m ike ịchọta ụzọ iji zụọ ahịa ha. Achọpụtara m na ọ dị ngwa ịhapụ usoro nke nnukwu ụlọ elu, yana anyụike kwụ ọtọ, maka ịrụ ọrụ nke ọma ọzọ na ebili mmiri, iji kpuchie azịza maka ebumnuche ụlọ ọrụ, nke na-emebeghị. M na-emeghe ka kọntaktị na-enwe ọganihu a dị mkpa ụzọ.
Zaghachi nelson sabino jaque bustos
Ezigbo mkpebi 🙂
Ike imeghari ohuru na Europe kedu ka ha si di?
Worldwa dum nwere 300 gigawatts nke ike anyanwụ nke fotovoltaic